Inkastoo aysan jirin saraakiil katirsan ciidamadaas oo warbaahinta uga waramay qorshaha howgalkaas lo hakiyay, hadan dadka deegaanka ayaa War-sidaha GO u sheegay inay dib ugu laabteen deegmooyinka Hobyo iyo Galkacyo.
Ciidankan oo todobaadkan gaaray deegaanka Camaara iyo kuwo kale oo katirsan gobolka Mudug ayaa dib u laabtay xilli dagaal kooban ay la galeen kooxda Al Shabaab.
Guddoomiyaha deegaanka Camaara ee dhinaca Galmudug Yuusuf Salaad Maxamuud, oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa xaqiijiyay inay dib uga laabteen ciidamadaas deegaanadii ay qorshaynayeen inay tagaan.
Wuxuu qiray inaysan jirin xiriir dhexmaray ciidamada iyo maamulka deegaanka.
Majirto ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay dhinaca maamulka Galmudug iyo dowladda Federaalka Somalia.
Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in howlgalkan caqabad ku noqday miinooyin lagu xiray waddooyinka soo gala degmada Xarar-dheere ee gobolka Mudug.
Kooxda Al Shabaab ayaa ku xooggan qaybo kamid ah gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca ay maamusho Galmudug, kuwaas oo go'doon galiyay degmooyinka qaybtood.
XARARDHEER, Somalia- Dhaq-dhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa qaybo kamid ah gobolka Mudug gaar ahaan dhinac ay maamusho Galmudug, halkaasoo ilaa shalay lagusoo daad gureeyay ciidamo tiro badan.
Hawlgalkan oo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidamada xoogga da ...
​Al Shabaab oo 8 Odoy dhaqameed ku qowracday gobolka Mudug
Somalia: Wasiirrada Waqtigu ka dhammaaday oo qodobo kasoo saaray duqayntii gobolka Mudug